ဝစ်ဂျက်တရား ၀ င်မှု၊ အထောက်အပံ့နှင့်ရောင်းအားအခွန် Martech Zone
ဝစ်ဂျက်တရား ၀ င်မှု၊ အထောက်အပံ့နှင့်ရောင်းအားခွန်
သင့်လျှောက်လွှာအတွက်ဝစ်ဂျက်တစ်ခုကိုထောက်ပံ့ရန်မည်သည့်တာဝန်ရှိသနည်း။ ဝစ်ဂျက်အင်ဂျင်တွင်တာဝန်ရှိပါသလား။ ဝစ်ဂျက်ခံထိုက်ပါသလား။ နှစ်ခုလုံး?
ဝစ်ဂျက်များကိုသင်၏အပလီကေးရှင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေနှင့်ထောက်ခံပါသလား။ သို့မဟုတ်သူတို့သည် 'သင်၏စွန့်စားမှုအတွက်အသုံးပြု' ကြသလော။
မင်းကမင်းပါ SaaS ဆော့ဖ်ဝဲဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်း၊ ထည့်သွင်းခြင်းများမရှိသောကုမ္ပဏီ၊ ဝစ်ဂျက်များပေါ်တွင်ရောင်းအားအခွန်ကိုသင်မည်သို့စီမံခန့်ခွဲသနည်း။ ဝစ်ဂျက်များအရအားဖြင့်သင်ဖြန့်ဝေနေသောဆော့ဖ်ဝဲလ်တစ်ခုမဟုတ်ပေလော။ ကြောင်း၏အခွန်ဖုံးကွယ်ဘာတွေလဲ
ကျွန်ုပ်ဖြန့်ဝေသောစာရွက်စာတမ်းများ၊ မီဒီယာများသို့မဟုတ်ဆော့ဖ်ဝဲများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ၏တာ ၀ န်၊ ထောက်ပံ့မှုနှင့်အခွန်အပေါ်သက်ရောက်မှုရှိနိုင်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အားအကြံပေးထားခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်မေးမြန်းသည်။ ဝစ်ဂျက်များကဲ့သို့သောအရာများကိုဖယ်ထုတ်ထားသည့်ပြသနာကိုကျော်လွှားနိုင်စေရန်သို့မဟုတ်အပိုဒ်တစ်ခုရှိပါသလား။
၎င်းသည်အထူးသဖြင့် Internet application များပိုမိုအားကောင်းလာသည်နှင့်အမျှအရေးကြီးသည်။ Apollo ကိုကျွန်တော်နားလည်သည်က browser ၏အပြင်ဘက်တွင် application တစ်ခုအဖြစ် run နိုင်သော်လည်း browser technology ကိုသုံးခြင်းဖြစ်သည်။ ကြောင်း၏ဂယက်ရိုက်ကဘာလဲ?
AT&T ကဒီတနင်္ဂနွေကိုငါ့ကိုစိတ်ပျက်စေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်သူတို့ရဲ့ ၀ န်ထမ်းတွေကတော့မလုပ်ခဲ့ကြဘူး
ဇန်နဝါရီ 18, 2007 မှာ 5: 52 AM
ဇန်နဝါရီ 23, 2007 မှာ 4: 10 AM
ဝစ်ဂျက်သည်ကုမ္ပဏီပြင်ပရှိကုမ္ပဏီ၏အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဝက်ဘ်စာမျက်နှာများနှင့်စားပွဲတင်ကွန်ပျူတာများတွင်ကုမ္ပဏီအတွက် 'သံအမတ်ကြီး' ဖြစ်သည်။
ဝစ်ဂျက်သည်ကုမ္ပဏီ၏ RSS feed နှင့်အတူတူပင်တာဝန်ယူမှုရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာကိုတင်ပြရာတွင်အသုံးပြုသောအသုံးပြုသူ၏မျက်နှာပြင်သည်အမှန်တကယ်ပါဝင်မှုထက်နည်းသည်။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ content တွေကိုသင့်လျော်သောသေချာပါစေ။
Desktop widget များသည်အထူးသဖြင့်၎င်းတို့အားပိုမိုအားကောင်းစေပြီးသုံးစွဲသူ၏ကွန်ပျူတာကိုတိုက်ရိုက် ၀ င်ရောက်နိုင်သောကြောင့်အထူးဂရုပြုသင့်သည်။ ဟုတ်ကဲ့၊ သူတို့ကိုသင်ဖြန့်ဝေတဲ့ဆော့ဝဲလ်အနေနှင့်ဆက်ဆံပါ။
MuseStorm မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ widget တွေကို QA အတွက်ကြိုးစားပြီးအခြားစီးပွားရေးဆော့ဖ်ဝဲများလိုဆက်ဆံဖို့ကြိုးစားတယ်။ အခြားဝစ်ဂျက်ရောင်းချသူများသည်လည်းအလားတူပြုလုပ်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။
23:2007 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 6, 46
သင်၏ပြန်ကြားချက်သည်၎င်းသည်အကြောင်းအရာနှစ်ခုလုံးကိုထောက်ခံသည်ဟုထင်ရသည် နှင့် ဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီနည်းနဲ့ချဉ်းကပ်ဖို့လိုလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ သင်၏ ၀ ယ်ယူသူများသည်ဖြန့်ဝေသောဝစ်ဂျက်များအတွက်အခွန်ပေးဆောင်သည်ဆိုပါစို့ - အကယ်၍ ၎င်းတို့သည်အခမဲ့ဒေါင်းလုတ်လုပ်နိုင်သည့်တိုင်သော်လည်းကောင်း၊